High Pressure Polyurethane ụfụfụ spraying Machine BDF-II - BOBO Machine Co., Ltd.
High Pressure Polyurethane ụfụfụ spraying Machine BDF-II
BDF-II pneumatic elu nsogbu Pu ụfụfụ spraying igwe bụ imewe sitework, n'ụzọ ziri ezi e ji atụ ihe, ọbụna agwakọta, moveable na obere Ọdịdị na itule nke na-eri na arụmọrụ. The HP ụfụfụ spraying igwe na ọtụtụ-eji n'ihi na mgbidi, ụlọ, friji, na igbe, anwụrụ mkpuchi nzube.
The pneumatic moto ịmụta ọhụrụ direction-mgbanwe abụọ direction ọrụ, ka ndị ọzọ mụ arụmọrụ tụnyere electric otu, adabara mgbagwoju anya sitework ọnọdụ.
Nkezi mgbapụta na-mere si igwe anaghị agba nchara, iji belata abrasion ka akàrà, ịgbatị igwe ndụ. Onwem na mmanụ tank maka DOP mgbaze ọcha scrap ihe.
6-9 N'arọ / min
Pneumatic chụpụrụ na ikuku Compressor
220V,50/60Hz, otu na-adọ (nwere ike ahaziri)
High Pressure Pu ụfụfụ Ọgwụ Machine CZ-1800
Duct Nlụpụta Auto-akara II
Elu okpomọkụ Elastomer Nkedo Machine CZ-20
Hydraulic ikiaka akpụ Machine BEM 1250